HADHWANAAG - HEEDHE MAY MAQLAYSAA? - Somaliland Post
Home Maqaallo HADHWANAAG – HEEDHE MAY MAQLAYSAA?
HADHWANAAG – HEEDHE MAY MAQLAYSAA?
Waxaan marka hore si xushmad leh u salaamayaa dhamaan bulshada Somaliland siiba Saxaafadda Xorta ah oo mowqif wanaagsan oo dhex-dhexaad ah iska taagay gardaradda Hadhwanaagnews. Waxaad muujiseen waayo aragnimo iyo bisayl mihnadeed. Waxa la dhaafay waqtagii wiil yar oo qalin sitaa Madaxda ugu hanjabi jiray “ Jeebka baadh ” haddii kale shaadhkaan ka wasakhaynayaa. Horaantii bishii Dec ,2018 waxaan Xafiiska Hadhwanaagnews ee Toronto goor maqreba kula kulmay Axmed Naasir Jibril. Waxa dibedda igu sugaysay xaaskayga oo gaadhiga ku dhex jirtay waqtigaas oo qabow iyo baraf badani dhacaayay. Axmed Nasir wuxuu iiga waramay xaallaadiisa dhaqaale iyo kirooyin lagu leeyahy waxaanu iga codsaday inaan taageero joogta ah uga raadiyo dawladda . Wuxuu ii sheegay inay Puntland iyo Somalila ay taageero dhaqaale u fidiyaan Saxaafadooda sidaa awgeedna aanay war xun uga qorin xukuumadahooda. Codsigaa Axmed Naasir kumaan qancin , si deggana waan uga ka cudur daartay . Dhawr jeer oo danbe telefoon ayuu igula soo xidhiidhay balse kamaan qaban .
Hadaba, maanta oo ay taariikhdu tahay 4/9/2019, waxay Maxkamadda Gobolka Maroodijeex xayiraad dul saartay Hadhwanaagnews. Waxaan Hay’adaha Garsoorka u gudbiyay dacwad nuxurkeedu yahay shakhsi weerar & sumcad dil “ Defamation & character Assassination ”.
Waxaan dacwadda kusoo oogay Mulkiilaha Axmed Nasir Jibril iyo Tafatiraha Abdirazaaq Goud oo deggan Hargeisa. Haddii denbigaasi ku cadaado ,ciqaabto waa xadhig dheer iyo ganaax lacageed. Axmed Naasir waxa la gudboon inuu Hargeisa yimaado oo si raganimo leh isu difaaco. Haddii aad maqnaato, waxa la qaban doona “ Trial in Absentia”, xukunka kasoo baxana waxa lagagag sheegi doona “ Radio Hadhwanaag” oo ka hadasha mawjadaha gaagaaban. Ugu danbayna waxaan ku leeyahay “ Lixdan baan jiree yaan indhaha laydhi kaa marin”
DULMIGII SOOMAALI KALA DILAY
Dhaqaaq – W/Q: Faadumo Buuni
Guddi Bogaadin Mutaystay
La-jaan-qaad, Geedi-Socodka Hayaanka Guusha ee Xisbiga Kulmiye – W/Q: Cabdixakiin Rays
Shiinaha iyo Soomaaliya way ku Karaamo Seegayaan Dagaalka ay Kula Jiraan...
Kulankii Djibouti: Wuxuu Badka Soo Dhigay Farqiga Madaxweyneyaasha Somaliland Iyo Soomaaliya...
Somaliland Maxay ku Faleysaa Midnimo? Qalinka Yuusuf Garaad